Zimbabwe blames Western 'hostility', opposition for investor unease - Zimbabwe Situation
0	August 22, 2018 9:10 AM
Western hostility towards Zimbabwe is deterring investment, despite President Emmerson Mnangagwa’s previous efforts to woo Western governments.
Source: Zimbabwe blames Western ‘hostility’, opposition for investor unease | IOL News
Western hostility towards Zimbabwe is deterring investment, the presidency spokesman said on Tuesday, comments in sharp contrast with President Emmerson Mnangagwa’s (above) previous efforts to woo Western governments. Picture: AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi
Johannesburg – Western hostility towards Zimbabwe is deterring investment, the presidency spokesman said on Tuesday, comments in sharp contrast with President Emmerson Mnangagwa’s previous efforts to woo Western governments.
But with a violent crackdown on opposition protesters by security forces after the election – a reminder to many of the repressive Mugabe era, the remarks by Mnangagwa’s spokesman George Charamba signalled that his charm offensive towards the West may already be unravelling.
As Zimbabwe became increasingly isolated under Mugabe, it turned to China to help prop up its economy.